TUSOOYOOYINKA: XIUMX CODSIGA QAABKU WAXAY TAHAY IN JOOJINTA SHARCIYADA - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » VIDEOS »TUSAALOOYINKA: CINWAANKA XAQIIQOOYINKA XIUMAHA CIQAABTA
TUSOOYOOYINKA: 28 DIB U HESHIISIDA CODSIGA QAABKA
WAXYAABAHA KA HELI KARTAA GURIYEYNTA GURIYEYNTA
Ma ogtahay in aad shaqooyin kala duwan ka sameyn karto kaararka? Ha tuurin sanduuqyada kartoonada sababtoo ah waxaan wadaagnaa ururinta qabow ee Mashaariicda DIY ee aad sameyn kartid. Noqo mid caqli leh oo adeegso malaysigaaga si aad u abuurto qurxiyo qurux badan oo loogu talagalay abaabulayaasha, laptops, waxyaabo kala duwan oo ku xeeran gurigaaga! U diyaari shaebox habka qurxinta quruxda. Qaado warqad xirmo ah iyo warqada wax lagu xiro ee midabka aad jeceshahay. Intaa waxaa dheer, waxaad baran doontaa sida loo sameeyo qaybinaha unugyada. Ku laabo sanduuq hore oo iPhone ah oo ku yaal saldhigga lacagta.
Barkinta Konteynaanta waa mid ka mid ah isbedelka ugu fudud ee naqshadda gudaha iyo waxaan ku tusi doonaa sida aad naftaada u dhigi lahayd. Uma baahnid inaad lacag ku qarash gareeysid tan, kaliya qaado laba buste, ku duub oo samee boodbood wanaagsan. Voila!
Ku qurxin tuujintaada cirifkaaga adigoo ku dhejinaya sharooto kulul. Iskaga jar qaybaha yar yar kuna rid t-shirt. Aynu wadno wadno. Qalbadda ku dabool warqad duugoobaya iyo birta dhawr ilbiriqsi si aad u oggolaato qalfoofka dhalaalaya. Warqadda ka saar oo rusheeyo glitter. Ready!
Waxaanu ku tusi doonaa sida aad ugu gudbin lahayd sawirrada dharka! Samee barkad jilicsan oo qabow! Qaado sawir saxiibkaaga ah, daabac kuna daawee kobac talaabo tallaabo tallaabo ah! Waxaa intaa dheer, waxaad si sahlan u rogi kartaa sawirada shumaca. Sawir sawir oo aad jeceshahay warqad unug. Ku dhaji sawir shumac oo ku dabool warqad caano ah. Si tartiib ah u diiriyaan daabacaadda timaha qalajiyaha illaa warqadda caanuhu bilaabanto inay dhalaaleyso. Ka saar xaashida wax lagu duubo. Ready!
Ka daawo fiidiyowgeena si aad u hesho sawir farshaxan si aad u qurxiso gurigaaga!
Ha iloobin inaad la wadaagto fikradaha farsamada farsamooyinkaaga!
00: 09 Sida loo daabaco sawir barkin
05: 48 Qabooji Kaalinta DIY ah
09: 42 Qalabka gacmaha ee rinjiga
03: Farshaxanada Xadhiga 08
07: 19 DIY Dufcadii Dufcadii
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=yqA_rRlR4yg